Rehefa tanteraka ny fotoana - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Rehefa tsara ny fotoana
Te hilaza ny olona fa mifidy hatrany ny fotoana ihany Andriamanitra ary mino aho fa marina izany. Ny iray amin'ireo tadidiko momba ny fampianarana Baiboly voalohany dia ny “traikefa ahazoako” izay niainako tamin'ny nahafantarako fa tonga teto an-tany i Jesosy tamin'ny fotoana mety. Nanazava ny mpampianatra iray fa tsy maintsy tonga ny lalao rehetra eo amin'izao rehetra izao mba ho tanteraka tanteraka ny faminaniana rehetra momba an'i Jesosy.
Niresaka tamin’ny fiangonana tany Galatia i Paoly momba ny maha-zanak’Andriamanitra sy ny fanandevozan’ny herin’izao tontolo izao. “Rehefa tapitra ny fotoana, dia nirahin’Andriamanitra ny Zanany, natera-behivavy, ary napetrany teo ambanin’ny lalàna, mba hanavotra izay ambanin’ny lalàna, mba hanan-janaka isika” (Galatianina) 4,4-5). Teraka i Jesosy rehefa tanteraka ny fotoana. Ao amin’ny Baiboly Elberfeld dia milaza hoe: “Rehefa tonga ny fotoana feno”.
Mifanaraka ny anton'ny planeta sy kintana. Ny rafi-kolontsaina sy ny fanabeazana dia tsy maintsy nomanina. Ny teknolojia na ny tsy misy azy dia mety. Ny governemanta an'izao tontolo izao, indrindra fa ny Romana, dia niasa tamin'ny fotoana mety.
Nanazava toy izao ny fanehoan-kevitra iray momba ny Baiboly: “Fotoana iray izay nanitaran'ny Pax Romana (ny fandriam-pahaleman'i Roma) ny ankamaroan'ny tontolo sivily, ka nahatonga ny dia sy ny varotra tsy ho nisy toy izany. Ny arabe midadasika dia mampifandray ny fanjakan'ny amperora sy ny faritra isan-karazany dia nampifandraisina tamin'ny fomba iray misy heviny kokoa amin'ny alàlan'ny fiteny grika miparitaka be. Manampy an'ity ny zava-misy fa latsaka tao amin'ny lavaka mangitsokitsoka tokoa izao tontolo izao ka na ny mpanompo sampy aza dia niantso mafy nanohitra an'io, ary hanoanana ara-panahy no hita hatraiza hatraiza. Tonga ny fotoana tonga lafatra amin'ny fiavian'i Kristy sy ny fampielezana ny filazantsara kristiana voalohany ”(The Expositor's Bible Commentary).
Ireo singa rehetra ireo dia nanana anjara toerana tamin'ny fisafidianan'Andriamanitra izao fotoana izao hanombohana ny fijanonana ho lehilahy sy Andriamanitra ao amin'i Jesosy ary eny amin'ny hazo fijaliana. Tena tsy fifanandrifian-javatra mampientam-po tokoa. Mety hisy hieritreritra ireo mpikambana ao amin'ny orkestra iray izay manao ny fizarana symphony. Amin’ny hariva mandritra ny fampisehoana dia mivory am-pitiavana sy tsara tarehy milahatra tsara ny faritra rehetra. Nanangana ny tanany ny mpitantana ka hanome famantarana ny crescendo farany. Niongotra ny timpani ary nihanalefaka ny fiforonan'ny fihenjanana.
I Jesoa no fara tampony, tampony, tampony, tampon’ny fahendrena, hery ary fitiavana an’Andriamanitra! “Fa ao aminy no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra” (Kolosiana 2,9).
Fa rehefa tapitra ny fotoana, dia tonga Kristy, Izay fahafenoan'ny maha-Andriamanitra rehetra. “Mba hampiononana ny fony, ho tafakambana amin’ny fitiavana sy ho amin’ny harena rehetra amin’ny fahatokiana ny fahalalana ho amin’ny fahalalana ny zava-miafina izay an’Andriamanitra, dia Kristy, Izay niafenan’ny haren’ny fahendrena sy ny fahalalana rehetra” (Kolosiana). 2,2-3 ELB). Haleloia ary Mirary Krismasy!